Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo Khudbad Xasaasi ah ka jeediyay Shirkii Golaha Amaanka
[ March 3, 2021 ] Dowladda Soomaaliya oo Amaro Cusub soo rogtay	Wararka Maanta
[ March 2, 2021 ] Madaxweyne Farmaajo oo ka Tacsiyeeyay Geeridii Xildhibaan Axmed Dhimbil ku timid.	Wararka Maanta
[ March 2, 2021 ] DEG DEG: Xildhibaan ka Tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya oo Muqdisho ku geeriyooday	Wararka Maanta
[ March 2, 2021 ] Midowga Musharaxiinta oo Eedeyn culus ujeediyay Madaxweyne Farmaajo	Wararka Maanta
[ March 2, 2021 ] Beesha Caalamka oo soo dhaweysay Heshiiskii Musharaxiinta iyo Xukumada	Wararka Caalamka
HomeWararka CaalamkaWakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo Khudbad Xasaasi ah ka jeediyay Shirkii Golaha Amaanka
February 23, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Halkan hoose ka aqriso qudbada oo dhamaystiran
Bayaan uu Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud, James Swan, ujeediyey Golaha Amniga ee ku saabsan Xaaladda Soomaaliya
22 Febraayo 2021
Madame Madaxweyne, Xubnaha Sharafta Leh ee Golaha,
Waad ku mahadsan tahay fursadan aad mar labaad golaha ugu soo gudbisay xaalada Soomaaliya.
Waxaan ku faraxsanahay inaan si wada jir ah ula soo muuqdo asxaabteyda qaaliga ah, Danjire Francisco Madeira, Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika. Aan u ka faa’iideysto fursadan bilowga kal-fadhigan si aan u xushmeeyo ballan-qaadka iyo u-hurnimada ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya tan iyo 2007-dii oo ay weheliyaan Xoogagga Soomaaliyeed ee geesinimada leh.
Shirka maanta ee Golaha ayaa ah mid ku soo beegay waqtigiisii iyadoo la eegayo isbadalada muuqda ee ka socda Soomaaliya todobaadyadii la soo dhaafay, iyo xitaa maalmo. Xiisadaha siyaasadeed ee sii kordhaya waxay khatar ku yihiin horumarka dowlad dhisidda Soomaaliya iyo xitaa amniga haddii aan lagu xallin wadahadal iyo tanaasul danta dalka ku jirta. Nasiib darrose, taas beddelkeeda waxaan aragnaa dabeecad xumo sii kordheysa, xeelado cadaadis, iyo tijaabooyin xoog ah oo sare u qaadi kara halista oo keliya.
Xiisadaha ka dhasha hirgelinta doorashada ayaa hada waxaa ku soo kordhay su’aalo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah dadka siyaasada ku xeel dheer ee ku saabsan sharci ahaanshaha xilka madaxweynaha ka dib markii uu dhamaaday muddadiisii dastuuriga ahayd 8 Febraayo. Xukuumaddu waxay soo xigatay qaraarkii baarlamaanka ee bishii Oktoobar u oggolaanayay Madaxweynaha inuu sii joogo, laakiin tan waxaa ku tartamaya kuwa kale.
Dhanka kale, subaxnimadii 19-ka Febraayo, maalin mudaaharaad ah oo ay ku dhawaaqeen Golaha mucaaradka ee Murashaxiinta Madaxweynaha, dhowr dhacdo oo rabshado wata ayaa la soo sheegay. In kasta oo faahfaahin buuxda aan la xaqiijin, dhacdooyinkaas waxaa la soo weriyey inay ka mid ahaayeen is-weydaarsiga hubaysan ee u dhexeeya shaqaalaha amniga ee dawladda iyo kooxaha amniga ee ay shaqaaleeyaan mucaaradka, iyo sidoo kale ka-noqoshada si ay u noolaadaan rasaas ay ridayaan ciidamada dawladda si ay u kala eryaan dibad-baxayaasha.
Xiriirka dadweynaha ee ka imanaya hoggaamiyeyaasha muhiimka ah wuxuu noqday mid sii kordhaya oo muran iyo iska hor imaad ah, taasoo muujineysa jahwareerka, kalsooni darrada, iyo dareenka cabashada ee ay dareemeen dad badan.
Sidaa awgeed, tani waa xilli kacsan Soomaaliya, maadaama hadallada iyo ficilladuba ay sii kordhayaan.
Aniga oo ka duulaya arrimaha aan kor ku soo xusay, bal aan si kooban u soo koobo dadaalkii ugu dambeeyay ee la doonayay in lagu dhaqaajiyo hirgelinta qaabkii doorashada ee 17kii Sebtember.
Casuumaad ay ka heleen Dowladda Federaalka, madaxda DFS iyo FMS waxay ku kulmeen Dhuusamareeb 2-dii ilaa 6-dii Febraayo, waxayna sameeyeen horumar laakiin ma gaarin heshiis kama dambeys ah oo ku saabsan arrimaha la isku haysto, oo ah: qaabeynta hay’adaha maamulka doorashooyinka; qaababka lagu soo xulo wakiillada ka socda “Somaliland” ee hay’adaha federaalka; iyo maaraynta doorashooyinka gobolka Gedo ee Jubaland State.
Intaa ka dib, Dowladda Federaalku waxay isugu yeertay guddi farsamo oo ka kooban wasiirro sare oo ka socda DFS iyo FMS, kuwaasoo ku kulmay magaalada Baydhabo 15kii ilaa 16kii Febraayo. Guddigu waxay ku dhawaaqeen inay gaareen xalal farsamo oo ku saabsan arrimaha la isku haysto, waxay xaqiijiyeen inay ka go’an tahay qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 ee geeddi-socodka doorashooyinka, waxayna xustay baahida loo qabo dib-u-habeyn cusub laakiin taariikheedka doorashada.
Iyadoo lagu saleynayo shaqada Guddiga, Dowladda Federaalka waxay ku baaqday shir madaxeedka FGS-FMS in lagu qabto magaalada Muqdisho 18-ka ilaa 19-ka Febraayo. Haddana, dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeeyay waxay carqaladeeyeen qorshayaashan, hoggaamiyaasha Jubaland iyo Puntlandna illaa iyo hadda waxay si qoomamo leh uga gaabsadeen inay ku biiraan DFS iyo FMSes kale shir-madaxeed. Anaga iyo la-hawlgalayaasha kale, waxaan sii wadaynaa dadaalka aan ku fahmayno waxna uga qabanayno walwalka labadan hoggaamiye si ay ugu soo biiraan geeddi-socodka lagu horumarinayo heshiiska 17 Sebtember.
Aniga oo ka duulaya xaaladan murugsan ee walwalka leh, maalmihii la soo dhaafay waxaan si dhow ula shaqeeyay, aniga iyo garabyada kale ee gobolka iyo kuwa caalamiga ahba, si aan ula xiriiro madaxda DFS iyo FMS, dadka siyaasada muhiimka ka ah, iyo wakiilada bulshada rayidka ah si aan ugu boorino waddo horay loo maro oo ku saleysan wadahadal iyo tanaasul qaran. xiisaha. Farriinta ka socota wada-hawlgalayaashu waxay ahayd mid cad oo ahayd inaysan jirin doorasho qayb ah, habsami-u-socodyo is barbar socda, iyo inaysan jirin tallaabooyin kaligood ah oo ay qaadaan madaxda Soomaalida. Hababka noocan oo kale ah waxay kaliya horseedi doonaan kala qeybsanaan weyn iyo halista iska hor imaad.
Aan cadeeyo: Waxaan wali ku qanacsanahay in qaabka la isku raacsan yahay ee 17ka Sebtembar uu bixinayo ikhtiyaarka ugu fiican ee la heli karo si dhaqso leh loogu socdo habka doorashada ee xulashada xubnaha baarlamaanka, senetarada, iyo madaxweynaha. Tani waxay yareyn doontaa dib udhacyada dheeri ah ee wareega afarta sano ee kala guurka ah ee Soomaaliya, waxaa la hubin doonaa in hogaamiyaasha qaranka ee la xushay ay leeyihiin waajibaad cad oo si weyn loo aqbalo, waxayna u ogolaaneysaa dalka inuu ka weecdo loolanka siyaasadeed ee hada socda oo uu u weeciyo muhiimada kale ee qaran ee muhiimka ah dadka.
Si horey loogu socdo wadadan, waxaa lagama maarmaan ah in hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ay u adeegsadaan dhammaan dariiqyada la heli karo wadahadalka iyo wadatashiga, oo ay ku jiraan xiriiro lala yeesho dhinacyo badan oo daneeyayaasha siyaasadda iyo shakhsiyaadka saamaynta ku leh bulshada rayidka ah si loo maqlo codkooda muhiimka ah. Si loo abuuro kalsoonida geeddi-socodka, waxay sidoo kale lagama maarmaan noqon doontaa in la hubiyo in maaraynta iyo kormeerka hannaanka lagu heshiiyey ee doorashada ay yihiin kuwo dhexdhexaad ah oo madax-bannaan intii suurtagal ah, ayna ku xiran tahay kormeer joogto ah. Xorriyadaha siyaasadeed ee muhiimka ah oo ay kujiraan kuwa hadalka, isku imaatinka, abaabulka, iyo helitaanka warbaahinta waa in la hubiyaa. Iyo wada xiriirka ka dhexeeya jilayaasha ugu muhiimsan – iyo gaar ahaan madaxda DFS iyo FMS – waa inay ku sii socdaan si joogto ah oo isdaba joog ah si loo yareeyo isfaham la’aanta mustaqbalka loona xaliyo dhibaatooyinka ka hor intaanay sii xumaan.
Qaramada Midoobay iyo la-hawlgalayaasha kale ee caalamiga ah waxay diyaar u yihiin inay Soomaalida kula socdaan wadadan horay loo sii marayo, iyadoo la siinayo xafiisyo wanaagsan ama gole wadahadal, iyadoo la siinayo caawimaad farsamo hannaanka, iyo la socoshada fulinta ballanqaadyada, haddii dhinacyada Soomaalidu u arkaan in tabarucaadani waxtar leeyihiin.
Feejignaanta dheer ee siyaasadeed ee qaran ayaa wali diiradda saareysa caqabadda taagan ee ku saabsan qabashada doorashooyinka, kan ugu weyni wuxuu noqon doonaa saameynta taban ee mudnaanta kale, sida horumarinta amniga iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha, dhameystirka dastuurka, iyo raadinta ajandaha horumarinta.
Al-Shabaab waxay wali wadaa qatarta koowaad ee amniga dalka. Al-Shabaab waxay kordhisay howlaheeda howleed tan iyo bishii Ogosto 2020, bilawgii 2021-na waxaa u muuqday heer cusub oo ku aadan tirada weerarada, oo ay ku jiraan inbadan oo ah Ismiidaamin qofeed iyo Gawaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiya, ee lagu bartilmaameedsanayay saraakiisha dowladda iyo shaqsiyaadka muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed.
Guulaha milateri ee muhiimka ah waxaa gaaray Ciidamada Amniga ee Soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa AMISOM ee ku sugan gobolka Shabellaha Hoose horaantii 2019 iyo markale horaantii sanadka 2020, kuwanna hada waa la sii xoojinayaa si loo suurtageliyo hormar dheeraad ah oo ka dhan ah Al Shabaab ee meelaha kale. UNSOS waxay ku adkeysaneysay bixinta taageerada AMISOM iyo xoogagga Soomaaliyeed ee u-qalma muddadaas oo dhan, in kasta oo ay jiraan dhibaatooyin ka dhan ah cudurka faafa ee COVID.
Dhanka kale, howlihii loogu diyaar garoobayay ayaa la dhameystiray si loo hormariyo kala guurka amniga ee Soomaaliya sanadka 2021, sida uu codsaday Golahan. Dowladda Federaalku waxay abaabushay shirar ay yeesheen Guddiga Amniga iyo Caddaaladda iyo sidoo kale Madasha Iskaashiga Soomaaliya horaantii bishii Diseembar – iyada oo la sii hormarinayo Habka loo dhan yahay ee Amniga iyo Qaabdhismeedka isla xisaabtanka. Waxaan ku dhiiri galineynaa Dowlada in ay sii wado dadaaladaas, isla markaana ay qabato shirkii dhalinta xooga ee uu ku dhawaaqay Raisul Wasaaraha sida ugu dhaqsiyaha badan.
Qiimeynta Madaxa Banaan ee Goluhu u igmaday ee xaaladda amniga iyo doorka saaxiibada caalamka waxaa loo gudbiyay Golaha 8dii Janaayo, Qorshaha Kalaguurka Soomaaliyana waa la cusbooneysiiyay oo ay Dowladda Soomaaliya u soo bandhigtay la-hawlgalayaasha amniga iyo Midowga Afrika PSC horraantii Febraayo. Kuwani dhammaantood waa cunsurro muhiim ah oo lagu horumarinayo ku-meel-gaadhka amniga ee sannadkan isla markaana aasaas u ah horumar dheeraad ah mustaqbalka.
Xaaladda bani’aadamnimada ee Soomaaliya ayaa weli ah mid aad u xun. Tirada dadka u baahan caawimaadda ayaa ka kici doonta 5.2 milyan oo qof sanadkii la soo dhaafay waxaana lagu qiyaasayaa 5.9 milyan oo qof sanadka 2021. Tani waa natiijada ka dhalatay kororka cunno yarida, aafooyinka cimilada, ayaxa ugu xun ee Ayaxa ku habsaday tobanaan sano, iyo saameynta Cudurka caalamiga ah covid19. Nasiib darrose, toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan aragnay koror ku soo kordhay kiisaska COVID ee Soomaaliya, taas oo kaliya ka sii dari doonta xaaladda bani’aadamnimada ee markii horaba adkayd. Soomaaliya waxay xaq u leedahay barnaamijka tallaalka COVAX, Qaramada Midoobayna, iyadoo si dhow ula kaashaneysa mas’uuliyiinta Soomaalida, waxay hubin doontaa in qaybtii ugu horreysay ee tallaallada si wax ku ool ah loogu qaybiyo shaqaalaha safka hore iyo kooxaha nugul ee dalka oo dhan. In kasta oo aan si qoto dheer uga mahadcelineyno deeq-bixiyeyaasha deeqsinimada leh ee 2020, baahida bani’aadamnimada ayaa sii socon doonta iyadoo aan mar kale ka codsaneyno taageerayaasha deeq-bixiyeyaasha Qorshaha Jawaab-celinta Bina-aadamnimada ee 2021, oo $ 1.09 bilyan loo codsaday.
UN-ka ayaa sidoo kale sii wadaya kala shaqeynta mas’uuliyiinta Soomaalida iyo la-hawlgalayaasha xallinta muddada-dheer ee dhibaatooyinkan bani’aadamnimo ee soo noqnoqday. Tusaale ahaan, La-Taliyahayaga Deegaanka ee Hawlahayadu wuxuu ku hawlan yahay Dowladda sidii loo horumarin lahaa siyaasadaha iyo istiraatiijiyaddaha la xiriira cimilada iyo sidoo kale jawaabaha wax ku oolka ah ee daadadka iyo wareegyada abaarta ee ay saameeyeen xaaladaha cimilada.
In kasta oo warbixinnadan saddex-biloodlaha ah ay sida caadiga ah diiradda saaraan horumarkii ugu dambeeyay ee xagga siyaasadda, amniga, iyo bani’aadamnimada, haddana waa inaan marwalba maskaxda ku haynaa in u adkeysiga isbeddelka wanaagsan ee Soomaalida u baahan doono dhisme hay’adeed; hagaajinta maamulka iyada oo loo marayo qodobo badan oo ay ka mid yihiin dib-u-habeynta dastuurka; maalgashiga caafimaadka iyo waxbarashada; ka-qaybgal ballaadhan haweenka, dhallinyarada iyo kooxaha la hayb-sooco; iyo dib u habeyn kale oo muddo dheer socotaa. UN-ka Soomaaliya wuxuu sii wadaa shaqadii uu Soomaalida kala lahaa dhammaan dhinacyadaas, isagoo og inay taasi u baahan tahay adkeysi iyo adkeysi
Waa lama huraan in himilooyinkaas waaweyn ee mustaqbalka ay maanka ku hayaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed muddo dheer ayey sugayeen inay horumar arkaan, welina way jilicsan tahay.
Taasi waa sababta aan ugu soo gabagabeynayo anigoo ku boorrinaya dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya inay dib uga laabtaan iskahorimaadka oo ay ka fogaadaan taatikada halista ah ee qaadashada-dhan. Taa badalkeed, waqtigan waa wakhti lagu raad joogo wadahadal iyo tanaasul si loo gaadho heshiis siyaasadeed oo loo wada dhan yahay oo la isku halleyn karo oo ah in la qabto doorashooyinka sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan iyadoo lagu salaynayo qaabka 17 Sebtember
Dowladda Soomaaliya oo Golaha Amaanka u sheegtay in Puntland iyo Jubbaland ay caqabadyihiin
Dowladda Soomaaliya oo war soo saartay ka dib Markii Musharaxiinta ay ku dhawaaqeen Banaanbax.
Dowladda Soomaaliya oo Amaro Cusub soo rogtay
Madaxweyne Farmaajo oo ka Tacsiyeeyay Geeridii Xildhibaan Axmed Dhimbil ku timid.
DEG DEG: Xildhibaan ka Tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya oo Muqdisho ku geeriyooday
Midowga Musharaxiinta oo Eedeyn culus ujeediyay Madaxweyne Farmaajo
Beesha Caalamka oo soo dhaweysay Heshiiskii Musharaxiinta iyo Xukumada